April 3, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Cali Sandule “Waar iidooroow wax aad dhacdaan iyo Kursi aad ku Fariisataan Baan Xaalkiinu dhaafsiisnayn” Daawo
Posted on April 3, 2018 April 3, 2018 by Kaafi
https://youtu.be/OZtNmj5qbxg?t=17m38s	Read More
UNSOM oo Tababar u Furay Ciidanka Booliska Somaliland…Daawo
https://www.youtube.com/watch?v=aGwIMxBmj7Q	Read More
Puntland oo xukun dil ah ku riday Askari 2-Xidigle ah oo Gaari Tikniko Ugala goostay Somaliland
Posted on April 3, 2018 by Queen Kiin
Maxkamadda Ciidamada Maamulka Puntland ee Dambiyada culus ayaa xukun dil ah ku ridday mid ka mid ah Askarta Maamulka Puntland kaas oo lagu eedeeyay in uu u goostay dhinaca Maamulka Somaliland. Maxkamadda waxay xukun dil ah ku ridey dambiile Maxamed Maxamuud Guure kaasoo 21 March 2018 kala baxsadey ciidamada Puntland gaari tikniko ah oo qalabaysan. Xukunka ayaa waxa uu ka dhacay xarunta maxkamada danbiyada culus ee Ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland halkaas oo uu…
Jawaari “Madaxweyne Farmaajo wuxuu igu yiri is Casil sabab la’aan”.Daawo
Posted on April 3, 2018 April 3, 2018 by Queen Kiin
Shir Jaraaid oo uu qabtay Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari ayuu ku sheegay in Madaxweynuhu ku yiri is casil isagoon samayn wax dib u heshiisiin ah iyo isku geenida labada Dhinac ee is haya. “Madaxweynaha wuxuu igu yiri is casil waan ka diiday Isma casilaayo sabab ayaan isku casilayaa Waxaan ku imid sharci waxaan ku baxayaa sharci” “Farmaajo isagaa soo fasaxay xildhibaanada barito shiraya Hadii meeshaas dhibaato ka dhaco ogaada inuu masuuliyadeeda qaadayo…
Wasiirka Arimaha Dibada ee dalka UK oo ka dalbaday Itoobiya in ay la wadaagto isbadalka lagu samaynayo Soomaliya iyo Sudan .
Wasiirka Arimaha Dibada ee dalka UK Boris Johson ayaa Madaxwaynaha dalka Itoobiya ee cusub Abiy Ahmed Ali ka codsaday in uu la wadaago isbadalka uu doonayo in laga sameeyo Somaliya iyo koonfurta Sudaan. Boris Johson ayaa barta kulamada soo dhigay hadal aad ay ula yaabeen umada Soomaliyeed oo Wasiirku yiri.. Boris Johnson “Congratulation to Dr Abiy Ahmed on becoming new Ethiopia Prime Minister.Big shared agenda to work on from development and political reform to Somalia,…